Izay tsy noraharahain'ny olona mainty (fizarana 1) - Afrikhepri Fondation
Inona ny Blacks Ignored (Fizarana 1)
Vakiteny: 18 min
La Justice is, miaraka amin'ny fahononam-po, la fahendrena le herim-po, iray amin'ireo hatsarana efatra an'ny Knight. Tokony ho tia ny rariny isika ary hamerina azy amin'ny olombelona. Ity fepetra ity dia mahatonga antsika ho mendrika ny anaran'ny olona.
Misy fahamarinana mandrakizay. Ahoana no fomba tsy nitenenan'ny olona izany mazava tsara izany fa ho hitanao izany amin'ny 2000 taona? Nahoana ny tenin'i Volney no tsy manana ny fahatsiarovan-dry zareo mendrika amin'ny fanadihadianay? Ny fiteny rehetra dia fiteny tokana ary fiteny ity BANTOU.
Volney, filozofa tena ilaina indrindra novokarin'i Frantsa, dia nilaza hoe: “Endrey izany lohahevitra hisaintsainana! Ny mahita ny barbarity sy ny tsy fahalalàn'ny Copte ankehitriny, vokatry ny fiarahan'ny fahalalinan'ny Egyptianina lalina, sy ny fanahin'ny Grika mamiratra; mieritreritra fa ity hazakazaka mainty hoditra ity, andevontsika ankehitriny sy ny tanjon'ny fanamavoana antsika, no tena tokony hananantsika ny kanto, ny siansa, ary hatramin'ny fampiasana ny teny; sary an-tsaina, farany, fa eo afovoan'ny vahoaka izay milaza ho sakaizan'ny fahalalahana sy ny maha-olona indrindra, no nahazo fankatoavana ny barabarous andevo indrindra, ary nametraka fanontaniana raha manana faharanitan-tsaina ny mainty hoditra an'ny karazana fotsy hoditra "(Voyage en Ég Egypte et en Syria, pp.67-69, 1822). Nametraka ny fanontaniako aho hoe: Inona no mety ho fototra, ao an-tsain'ilay filozofa, noho ny fanamarihana nataony momba ny mainty hoditra sy ny fampiasana kabary eo amin'ireo vahoaka Eurasia? Diso hevitra ve izy sa nisy marina tamin'ireto teny ireto? Fa maninona no mbola tsy nisy nanitsy ireo teny ireo, izay nanana toetra ikoizana? Ireo no hany fanontaniana tena tsy maintsy novaliako tamin'ny fomba fiteny.
Fitsarana laharana 1: The Medu Neter
Grika sy latinina dia fiteny Bantu. Grika, izay mialoha ny latinina, dia mifototra amin'ny medu neter. Izany koa no tranga misy amin'ny fiteny afrikana rehetra, na inona na inona izy ireo, satria ny medu neter dia tsy noforonina ho fiteny iray nohavaozina, fa toy ny taolam-patin'ny kômonio izay natao hanohanana ny fototry ny fiteny rehetra voalazan'ny olombelona. Ao anatin'izany dia masina ny olona voasokitra. Tsy fomba fijery chauvinista izany fa ny tena zava-misy dia miaiky fa toy izany avy amin'ny Guides of Humanity, izay tsy niraharaha ireo zanatsoratra. Izany no mahatonga ny rafitra momba ny fifandraisana dia azo atao mivantana eo anelanelan'ny Medu Neter sy fiteny iray ampiasain'ny olona na aiza na aiza. Ireo teny lazaina fa indô-Eoropeana dia angano, tsy misy izy ireo. Ny sehatra antsoina hoe Indo-European, izay mifandray amin'ny vahoaka leucodermal, dia angano, tsy misy izany. " Indo »Tonga avy amin'ny« Hind "," Indu "ary midika hoe" Noir », Teny ampiasain'ny Persiana, hoy izy, hanondroana ny vahoaka Dravidian. Diso ihany koa ity angano ity satria ny "Hind", "Hindi", "Hindu" dia avy amin'ny " Nhindo »,« Hindha »,« Hindi ", Izay samy midika hoe" Mainty "," Mainty "," Mainty "amin'ny fiteny Bantu, indrindra ny fiteny Bassa ampiasaina ao Kamerona. Ny mponina antsoina hoe Dravidians dia mifandray mivantana amin'ireo vahoaka Bantu ao amin'ny faritry Great Lakes ary ilay antsoina hoe "Hind" Persiana dia tsy Persiana. India, toa an'i Kemet, dia midika hoe "The Land of Blacks" ary ho hitantsika fa na taiza na taiza nisy ny mainty hoditra, dia notononin'izy ireo araka ny lokony ny fireneny. Raha ny tena izy, ny fiteny Persiana sy ny fiteny "Hindou" dia mifandraika amin'ny fiteny Bantu, ity no rohy. Vokatr'izany, rehefa miteny isika hoe "Indo-European", dia adika amin'ny "black-European" izany, fa io teny io dia ampiasaina hanondroana olona leucodermia, izay voaporofo fa tsy misy dikany.
«EoropaNomena anarana araka ny zanakavavin'i Phoenikana amin'ny anarana mitovy, Europa. I Eropa dia anabavin'i Cadmos, mpanorina ny Thebes ao Boeotia (Gresy). Cadmos dia andriana Kemite, izay tantara dia niteraka an'i Thebes, tany Ejipta Ambony, voalohany tany Phenicia ary avy eo tany Gresy. Nomeny anarana Gresy ilay tanàna naoriny tany Gresy taorian'ny anaran'ilay tanàna niaviany tany Kemet (Afrika). Na izany aza, ny Cadmos, raha ny marina, dia tsy manondro olona tsirairay, fa vondron'olona melanoderm. Ny fahatsiarovana azy dia mbola nitadidy ny Fenisianina tamin'ny alàlan'ny andriamanitr'i Chamos, ny sarin'ny masoandro, andriamanitry ny Moabita, ny Kananita ary ny mponina voalohany tany Palestina. Chamos dia avy any Kem, Kam, Cham, sns, " Cadmus "Miampy ny" d "dia fanovana nyChamos. Eoropa, rahavavin'i Cadmos, tsy afaka ny ho zavatra hafa afa-tsy ny endriky ny Afrikana, izany hoe rakotra charcoalsatria io fehezanteny hoe "kem" io dia natolotry ny sarin'ny hazo sarobidy ary voarakitra ao amin'ny Wöterbuch derägyptischen Sprache toy ny "arina arina may" dia midika hoe "arina arintany" ary nadika tamin'ny teny hoe "mainty".
Noho izany rehetra izany dia azo hamarinina amin'ny famaranana izany isika ny sokajy "Indo-European" dia sokajy nebulousRaha tsy misy tena fototra, ary ny fiteny anglisy antsoina hoe Bantu mampiasa mitovy hevitra, izay mahatonga Tonga lafatra rehefa mandinika ny tenin 'Volney ary nianatra ny momba ny zava-misy fa hanorina.
Fitsipika laharana 2: Latina
Ny Latina dia nanana faniriana hisolo ny Medu Neter tamin'ny fanahin'ny fiangonana katolika romana izay vao avy nametraka ny fahefany amin'ny faritany rehetra manamorona ny Mediterane; fiteny iray izy io izay namboarina tany Afrika, tany Alexandria mba ho marimarina kokoa, ary entin'ny olona avy any Afrika ny olona any Eropa. Haka ohatra roa isika ho an'ny ohatra:TertullienNy iray amin'ireo ray ao amin'ny Fiangonana, izay tsy narahina tamin'i Origène, dia ilay nanefa ny misterin'ny Trinite ny Fiangonana. Izy ihany koa no voalohany nanolotra ny litorzia latinina, ny fahasosoran'ny teny grika.Tertullian, natolotra ho Berber, dia Afrikana mainty hoditraaraka ny asehon'ny boky Kintana mainty, ny fisehoana afrikanina tany am-piandohan'i Eoropa avy amin'ny Runoko Rashidi. The term BerberAnisan'ireo Romanina, dia tsy nanondro ny sokajin'olona izay ampiharina ankehitriny, fa ny vahoaka rehetra izay tsy heverina ho Romanina. Manome Carthage razambe Berber, ny arkeolojia an'ny tranonkala dia tsy manamarina an'ity kinova tantara ity. Carthage dia manana ny fivoarany amin'ireo mponina afrikanina nofaritan'i Colette sy Gilbert Charles-Picard: "Tsy misy amin'ireto physiognomies ireto manolotra karazana semitika antsoina hoe Semitika, miaraka amin'ny tarehy lavalava, rano anaty rano na orona mihantona mihitsy aza, karan-doha nivonto teo ambonin'ny vozona. izay antenaina ho hita ao amin'ny zanatany fenisianina ... Ny fandinihana antropolojika an'ireo taolana hita tao am-pasana dia manaporofo fa tsy nisy firaisan-tsaina ara-poko; ilay antsoina hoe karazana Semitita dia tsy hita ao mihoatra ny any Sidona any an-kafa ... Ny ankamaroan'ny vahoaka Punic dia toa manana razambe Afrikana Negro, izay nanandrana ny volony marevaka, ny lohany ambany, ny molony feno... Toa ny lehilahy ny vehivavy, ary angamba tsy te hatao ny tatoazy ... Ny takolany dia sadika amin'ny kapoka marindrano izay mahatsiaro ny vatana an'ireo Mainty Hoditra loko sy ny Polinezianina "(Daily fiainana any Carthage tamin'ny andron'i Hannibal IIIe eo anatrehan'i Kristy, p. 1959). Ny Carthaginians dia avy amin'ny karazana fisaka toy ny Cadmos, natolotra ho Fenisiana ihany koa.
Victor 1er, iray amin'ireo papa afrikana ao amin'ny fiangonana katolika romana, mahafeno fepetra ho "Berber" ihany koa, no papa voalohany nanangana lamesa tamin'ny latina, ka nanimba ny grika. Tokony ho takatra fa ny zava-miafina ao amin'ny fiangonana katolika romana dia maniry ny hahazo aingam-panahy avy amin'ny fomban-drazana afrikanina razambe ary amin'io no nanehoan'ny latinina, avy amin'ny aingam-panahy Bantu, toetra masina amin'ny maodelin'ny Medu Neter; satria ny latina no fototry ny fiteny rehetra avy amin'ny lovantsofina Kristiana ary miseho indrindra amin'ny fanjakan'ny Moors. Hiresaka momba ny Moors isika atsy ho atsy.
Amin'ny fiandohan'ny teny Katolika ": Milaza izahay fa" katolika "midika hoe" manerantany ", avy amin'ny teny grika" khatolikos "Noforonina avy amin'ny teny Kata et holos. Ny rakibolana dia manome Kata ny dikan'ny "tanteraka" sy ny holos ny an'ny "zava-drehetra". Ny fepetra Kata mihevitra ny endrika ho "Indo-European" KMTA; io no tena anaran'i Kemet / Kamita, ilay an'ny Tany roa amin'ny endriny tena izy. Ny diksionera dia manome an'io radical io ny dikan'ny "ambony ka hatrany ambany », Ny dikanteny ara-bakiteny nekena Kemet, Ambony sy Ambany (Egypt), ny teny hoe "Egypt" tsy hita ao amin'ny voambolana Kemite. " Holos "," Rehetra ", dia niforona avy amin'ny radical hl avy amin'i Helios, ny Masoandro. Raha ny marina dia mitovy ny fepetra hr, le r tonga marina ao l manaraka ny fitsipiky ny fehezan-teny fonetika. Helios, as Hr, dia manana ny dikan'ny hoe "loha", "tarehy", "tarehy". amin'ny khatolikos, isika dia manana ny heviny ara-bakitenin'ny "lohan'ny ambony sy ny ambany", "ny tarehy an-tampony sy ny ambany", izany hoe "ny mpanjakan'i Egypte ambony sy ambany", ny vatana iray manontolo (ny ny faritany dia maneho ny vatan'i Osiris), ny fitambarany, noho izany ny hevitry ny rehetra. Io fifanoratana io dia manamarina ny toetran'ny papa sy ny voambolana izay nindramin'ny Eglizy Katolika Romana tamin'ny fomba amam-panao litorzika ao amin'ny Lohasahan'i Neily.
Fitsarana laharana 3: Ary inona no lazain'i Afrika momba izany?
Ny radical "Indo-European" mel manome ny Sanskrit Mala Ary ny Grika Melas », Ny teny mahery indrindra amin'ny teny grika milaza haizina. Io radika io ihany dia mampifangaro ny "melli" latinina izay anarana izay mbola nampiasan'ny Eraisianina Renaissance nanondro an'i Mali, satria ny "Mali" dia midika hoe "Mainty". Ny melika radika dia ilay mamorona ny teny grika " makar Izay midika hoe "voatahy". "Makar" mandrafitra ny teny hoe " Makros "Midika" Lehibe ", ny latina" Magnus "," Maximus ", izay mitovy dikany, mitovy hevitra amin'ny" Wr ", epithet of Usire. Avy amin'ny teny hoe "makar" no ahazoantsika azy " Makarios ", Teny grika izay manondro ny Masina, ireo izay tonga ao amin'ny Champs-Élysées, ilay" paradisa "an'ny Grika. Na izany aza, ny Makarios dia ny Greekision'ny " Maakherou "," Just of Voice ", epithet iray hafa an'ny Ousiré, ary manondro ny satan'ilay miditra amin'ny Field of Iaru, ilay" paradisa "an'ny Kemites.
Ny teny "Ghana" dia metathesis an'ny "Ngala", ny anaran'ny empira amin'ny endrika tena izy. Tsy misy dikany ny endriky ny Ghana, izay mampiseho fa io dia teny avy amin'ny famakiana tsy Afrikana ary nanaiky anio ho anaran'ny empira manana. ankehitriny ny tarana-mpanjaka Jaa-Ogoo dia ilay nifindra monina avy tao amin'ny lohasaha Neily ary nanangana izay ho tonga ny fanjakan'ny "Ghana". Ny Mpanjakan'ny Jaa-Ogoo dia nitondra ny anaram-boninahitra Galo et Malo. Aboubacry Moussa Lam dia nanao izao fanamarihana izao: "(…) eto isika dia misy ny fitoviana tanteraka, izay mihoatra ny fitaovana hanoratana ny voambolana sy ny famolavolana ny tena zava-misy. mr (hoe) mifanaraka amin'ny pulaar rem- (mamboly), ny teny hoe pulaar dia azo avy amin'ny fahazoan-dalana tsotra ho an'ny kômonio amin'ny teny ejipsianina. Egyptian rmnyt (fanararaotana) dia manondro ny pulaar remnata (izay mahatonga ny fambolena) izany hoe fanararaotana; mdr (tapitrisa aroure) dia manely ny pulaar leemnu (fanadihadiana), ny r afaka manome ny l ao Pulaar. rMN dia manome antsika, angamba, tsy hiteny mazava tsara, ny fiandohan'ireo teny i Lamana et Lamini. Ny Laman dia, ao Wolof sy Seereer, ny zokiolona miandraikitra ny fitantanana ny faritany; Amin'ny maha-izy azy, dia manao fanadihadiana (leeman-in pulaar) ho tombontsoan'ny tantsaha; inona ny famantarana famantarana ny horonantsary nosoratan'ny mpanoratra an-tsoratra nMR, sandry apetraka tsara amin'ny fijoroan'ny fanadihadiana (fanamarihan'ny mpanoratra: Anisan'ireo Peuls any Kamerona antsoina hoe olo ambony io Lamido, io ihany no radika Lamis included in this term. Ny iray amin'ireo anaran'i Ramses II dia nadikan'i Mery-AmunMamboraka ny anarany izany i Lamana ou Lamini izay nosoratana tamin'ny famantarana sy ny anarana hoe Andriamanitra, jmnsatria i Amani na i Imana dia midika hoe Amon ary ny hoe azo vakiana Mer ou rem, le r mety ho lasa lLaman na Lamini.) Toy ny Lamini des Mandingues, dia manohy an'i Moussa Lam, araka ny nambaran'i Youssouf TataCissé, toerana, faritra voafaritra mazava tsara amin'ny ankapobeny. Toy izany koa i Youssouf Tata Cissé izay mampianatra antsika izany Mara, anisan'izany ireo mponina politika. Izany no fotoana ahatsiarovako izany any Pulaar maro misy dikany mpiambina, Tory, tompon'andraikitra. Ireo teny ireo dia mazava ho azy fa mampahatsiahy ny Ejiptiana mr (mpiandraikitra, mpiandraikitra) araka ny Fischer. Malo izay, araka ny filazan'i Yoro Dyao, ny lohan'ny sampan'i Jaa-Oogo, dia ampitahaina amin'ny teny ejipsianina mr. Raha ny lohateny lehibe indrindra an'i Jaa-Oogo, Galo, dia tokony hoentintsika akaiky kokoa ny Ejiptiana izy lalao (izay ambony), lehiben'ny (ny h Ejiptiana afaka manome gamin'ny fiteny Negro-Afrika). Araka izany, ny lohateny roa an'ny Jaa-Oogo dia hahita fitoviana amin'ny lohateny Egyptianina: mal / Mr et Galo / hry. Tsy dia mahagaga loatra izany, fa ny mifanohitra amin'izany, satria tsy tokony hohadinointsika fa ny fifindra-monina voalohany avy any Ejipta dia ny fifindra-monina jaa-oogo (A.Moussa Lam, Ny Lalan'ny Nil, pp.87-88)
Le h dia tanteraka ao g, le r en l. Galo (lalao, izay ambony, ny mpitarika) ary Malo (mry, ny mpiambina, ny mpanara-maso) dia mitovy amin'ny hr. Malo lasa makar any Gresy, midika inona The Blessed, ary manaiky izany isika ratsy, mrydia midika hoe malala any Kemet (adikantsika meryamon ny malalan'i Amôna, ilay niravoravoan'i Amôna). Malo et GaloOpen book 01.svg Endrik'anaranahr, dia teny lazaina noirtahaka ny hitantsika faingana; hr dia ny fanoratana ho an'i Horus.
izany no Malo izay tonga Mali. Ny fanamarihana eoropeana dia misy an'i KanKan Moussa, amperoran'i Mali, miaraka amin'ny anarana Moussa Melli; izy io dia "Moussa Malo" izay midika hoe Moussa ilay Mpanjaka.
izany no Galo izay tonga Ghana ou Ngala, ary araka izay nolazainay, dia mitovy amin'ny Malo. Galo,Ngala, Ghana, dia iray sy teny iray avy amin'ny fomba fitenin'ny fiteny sy etimolojika, mifanaraka amin'ny radika hr, le h tonga marina ao g ou ngraha ampidirintsika ny tsara rafitra, ary ny r tonga marina ao l. Ireo teny ireo dia midika ho hevitra iray ihany, zava-misy mitovy. Antsoina hoe tena andriamanitra lehibe indrindra an'ny Mandé (Malinké, Bambara, sns) Maa Ngala. Maa Ngala midika hoe "Tompon'ny rehetra". "Holos" nataon'i katholikos ary "Ngala" avy any Maa Ngala dia avy amina fefy iray ihany hr ekena hanondro "ny loha", "ny tarehy", "ny tarehy", fa koa ny matoanteny "mandoro".Holos, Horos mandroso amin'ny fakany etymological iray ihany. Horos toy ny tonon'andro dia avy amin'ny "ora" amin'ny teny frantsay, "ora" amin'ny teny anglisy, "hora" amin'ny latina; na izany aza ny fehezan-teny manondro ny ora ao Kemet dia ny radical consonantal hr. Ity radika ity hr dia ny taolam-paty izay hipoitra ireo teny rehetra hianarantsika ato amin'ity lahatsoratra ity.
« Na aiza na aiza misy ny lanitra, dia misy izany Maa Ngala Lazao Bambara (AH Ba, Aspects of Civilization Afrikana, 140). Io famaritana io dia manondro Ngala amin'ny hevitry ny lanitra, "izay any ambony", ny fitenenana " ngalakolo "taolana avy any an-danitra, mbola mamela azy ireo hamaritra izany. Ngalissa dia ny anarana lazaina Reine ao amin'ny faritr'i Great Lakes any Afrika, ngali raisina ho toy ny radika "mahasoa" nanomboka Ngalifourou midika ara-bakiteny hoe "ny mpanjakavavy maty vady".
Ngala io ihany koa Ngalo, "Ilay Tompon'ny Lanitra", ny oracle an'i Jèki la Njambé'a Inono. Ngalo manondro ny falcon, tandindon'ny Horus, eo anelanelan'ny Baka, ireo mponina voalohany ao amin'ny ala tropikaly.
Argument number 4: Ny dikan'ilay teny hoe "Etiopiana"
Manomboka izao dia tsy raharahain'ny Negro intsony fa ny razany, izay nifanaraka tamin'ny toe-piainan'ny lohasahan'i Neily, no mpitari-dalana tranainy indrindra amin'ny zanak'olombelona amin'ny lalan'ny sivilizasiôna. Nahita ny kolontsainy ny Firenena Negro, tafakatra amin'ny vazan-tany efatra izy ireo, manan-karena sy mendri-kaja toy ny vokatry ny Tompo. , ireo jamba amin'ny famitahana mitohy, ary ankehitriny dia mipaka amin'ny faravodilanitra vaovao. Nilazana aho fa ny teny hoe "Etiopiana" dia midika hoe "tarehy may". Rehefa nandeha ny fotoana, dia azoko antoka fa tsy ho fantatry ny Grika mihitsy ny fomba hamoronana teny hanondroana ny tompony, ary io teny io dia voatery avy amin'ny fiaviana Kemite endogenous. Marina ny ahy. "Etiopiana", avy amin'ny teny grika " Aithiops "Midika" lanitra "roa," tarehy "ary" may ". Ny mpanoratra dia ho namaky azy ho roa, izany hoe aitho amin'ny lafiny iray, izay mety hanana ny hevitry ny "mandoro", ary op Etsy ankilany, izay mety hanana ny dikany "tarehy". Ity etimolojia ity dia tsy mahita ny fanohananay satria tsikaritray koa fa amin'ny teny grika ny teny op ny dikanyfahazavana, ny View (Charles Ploix, Ny natioran'ireo andriamanitra..., p. 242). Ireo teny ireo, fahazavana,View, dia ny teny izay, araka izay aseho, dia mifandray amin'ny matoanteny handoro.
Ao Kemet, ny matoanteny form handoro izay handehanantsika hihemotra no nahatonga antsika ho akaiky kokoa ny alahelon'ny Masoandro ny Noon. in Black Athena, Niverina tamin'ity endrika etymolojika ity i Martin Bernal rehefa nesoriny ny fifandraisan'i Heracles, Khonsu sy Shou. Nomarihiny toy izao: "Sethe, JG Griffiths sy Lloyd dia nanondro ihany koa fa Khonsu dia niraisana akaiky tamin'i Shou, andriamanitry ny habakabaka, fantatra fa mahery mpiady. Ny fifandraisan'i Shou dia nifamatotra tamin'ny herisetra tamin'ny andro mitataovovonana. Ity indray dia azo ampitahaina hrr (May) ary i Erra mahery fo-demonia. »(Black Athena, pp. 181-182). Erra dia andriamanitra infernal avy any Mesopotamia mifandray amin'ny andriamanitra Nergal.
Ity fampatsiahivan'i Martin Bernal ity dia ahafahana mandika ny rohy izay napetraky ny Ejipsiana teo anelanelan'ny hevitra handoro et face, toy ny ataontsika ankehitriny amin'ny "Aithiops", "tarehy may", avy amin'ny teny Grika. Eny tokoa, ny taolana konsonanta hr, "Burn", dia mampiseho radika mitovy amin'ny ampiasaina amin'ny fanondroana ny tarehy, hr. Noho izany, hr dia hanana ny dikany handoro et face. Ohatra, ny anarenina dia adika DD-hr-Hnm tamin'ny "ny endrik'i Khnum nilaza", sy ny teny irt hr, izay ampiasaina hamaritana ny afo amin'ny fombam-pandefasana fanatitra eo amin'ny afon'ny alitara, dia maneho mazava ny toetra mampivarahontsana ny uraeus, zavatra izay mitondra ny handrin'ny Tompo.
Amin'ity fehin-kevitra voalohany ity dia nanampy i A. Moussa Lam fa: "Ny fiteny afrikana (Pulaar, Wolof, Seereer) dia mampiseho fa ny dikany nomen'ny Egyptologists Andrefana hr (tarehy, tarehy) dia tsy maintsy fenoina dikany hafa: loha. Marina tokoa fa pulaar hoore dia manondro ny loha sy ny teny rehetra seebdeet woppu hoore tsy isalasalana fa manondro ny loha satria ny seza faharanitan-tsaina no loha ary ny isan'ny olona dia ataon'ny loha "(La Conscience historique africaine, p. 133). Ity vakiteny ity, nofaritan'ny famakafakana nataon'i Bernal, dia ahafahantsika mamantatra ny sahan'ady voalohany hr manodidina ny hevitra face, face, lohany, handoro. Ao amin'ny Ejiptiana fahiny, to be intelligent hoy i spd hr, izay maneho ny rohy napetraka eo anelanelany hr ary ny loha. Noho izany, irery, ny fehezanteny kemite hr, amin'ny dikany atolotray arakaraka ny sahan-kevitra ampiasaina, dia manatevin-daharana ny hevitra hoe "tarehy may", nyAithiops ny Grika. Ny dikan'ny teny grika dia toa avy amin'ny dikanteny ara-bakitenin'ny fomba fiteny nentim-paharazana Nilotic, izany hoe hr.
The radical hr, izay voafaritra tsara, dia ilay nanoratra ny anarana hoe Horus, Hr (Ohatra: HR-wd3, "Horus Prosperous"). Ity radical ity, izay nampifandraisina tamin'ny loko mainty, dia azo jerena amin'ny alàlan'ny sary masina izay anehoantsika ireo andriamanitra lehibe indrindra amin'ny panteon ejiptiana. Mampahatsiahy antsika i S. Mayassis fa: "ny mainty dia matetika ny lokon'andriamanitra. Mainty i Osiris. Isis dia noheverina ho andriamanibavy mainty sy mena, Nubian iray, ary nafenina mainty. Araka ny Porphyry, Knef, mainty ilay andriamanitra namorona ny Ejipsianina. Misy andriamanitra mainty miseho eo amin'ny fasan'i Sethi Ier. Andeha isika hahatsiaro an'i Demeter Noire. Black dia, ho an'ny pretra ejipsianina, iray amin'ireo loko masina. Ilay andriamanitra mpamorona tampony, amin'ny sanganasa famoronany, dia mila mpivady mpanombana efatra: 1) Amon sy Amon.t, ilay mistery; 2) Noun sy Noun.t, ny hantsana selestialy, ny rano primordial, ny zavatra alohan'ny zavatra; 3) Kak sy Kak.t, maizina ary 4) Hou sy Hou.t, faharanitan-tsaina. Fa manana ohatra hafa koa isika. Voaloko mainty ny aloky ny fanahy. Miditra ny lanitra amin'ny endrika kintana mainty ny fanahy. Ny mpanjaka maty dia mamahana ny ronono ombivavy mainty roa, mpitsabo mpanampy ny fanahy Heliopolis. Ny mpamokatra kilometatra Km dia manome anao ho anao. Km wr no epithet'i Osiris, an'i Osiris mainty fantarina miaraka amin'i Athribis, miaraka amin'ny ilay omby mainty lehibe. (...) Tao amin'ny papyrus amoron-dranon'i Herben (XXIedyn.), Osiris misy nofo mainty ary amin'ny ithyphallic dia fantatra amin'ny Masoandro. Avy amin'ity toetran'ny andriamanitra ity no misy ny baolina mena, mariky ny tanjaka, izay ivoahan'ny scarab mainty, ny Masoandro vaovao. »(Mystery and Initiations of ancient Egypt, pp. 395-396). Ity loko mainty ity dia nankasitrahana fatratra, hoy i A. Moussa Lam, mahatsiaro fa ireo andriamanitra lehibe amin'ny panteon ejipsiana dia nomena ny epithet noir Izany no an'i Hathor, Apis, Min, Thoth, Horus, sns. Nosoratan'i Osiris izany KmWr, "The Great Negro" (Les Chemins du Nil, p. 82).
Horus, Hr, dia ny endriky ny Masoandro. Hora, lalao, ao Kaldean, dia midika hoe Khem na Hem (Ham, Cham) ary midika The Burnt; io no epithet ara-Baiboly izay ampiasaina hanondroana ny vahoaka etiopiana (jer. Noa sy ny ozona nataon'i Cham). Tsaroantsika rehetra ny Tononkiran'ny Tononkira izay manome ity teny ity ho an'ny Etiopiana: " Aza mitandrina ny voloko mainty: ny masoandro no nandoro ahy (Hira 1, 6). Ny Masoandro sy ny loko mainty dia avy amin'ny rafitra fanovozana nipoitra avy tao amin'ny Lohasahan'i Neily tamin'ny andro taloha ela. Ny vahoaka rehetra tamin'ny andro fahagola nahalala fitaomana etiopiana dia mamaly ny mitovy amin'ny paradigma. Chamos, andriamanitry ny Moabita izay nisolo tena ny Masoandro (Azaïs, 1853) dia maneho ny iray amin'ireo fisehoan'io fomban-drazana io ao amin'ny Land of Canaan, Palestine ankehitriny. Ny angano Phaeton, any Gresy, dia azo ampitahaina amin'ity fomban-drazana ity. Toerana Ovid ao amin'ilay dia mampalahelo an'i Phaeton, " ny Brilliant "Ny zanak'i Helios, ny Masoandro, ny masoandro figuration kapila, ary ny dia dia natombony tamin'ny kalesy ny voro-drainy, fitandremana akaikin'ny ekoatera, ny fandaharana tao ambadiky ny fijery ny olona mainty hoditra (Ovid, Metamorphoses, 2, 235). Diodorus Sisila, eo ambany laharam-pahamehana ny Etiopiana koa ny mametraka eo amin'ny asa ny masoandro ny fahaterahan'ny firenena avy any Etiopia " Voalaza fa Etiopiana no voalohany amin'ireo lehilahy rehetra, nosoratany, ary miharihary ny porofo. Voalohany indrindra, ny olona rehetra dia miombon-kevitra tanteraka fa tsy avy any ivelany izy ireo, ary teraka tao amin'ny firenena izy ireo, azontsika antsoina hoe olona teratany izy ireo; dia toa miharihary amin'ny rehetra fa ireo lehilahy monina any atsimo dia mety ho voalohany avy amin'ny tratran'ny tany. Fa ny masoandro mahamay namaoka ny tany mando sy ny fanaovana azy io sahaza ho an'ny taranaka ny biby, dia azo inoana fa ny faritra akaiky indrindra ny masoandro mponina voalohany amin'ny manan'aina ". (Tranofiraketan'ny Tantara, III, 2).
Ankehitriny, any Afrika, dia misy ihany koa ny fahazoan'ny olona ny sarin'ny masoandro, hita ho endrika, tarehy, loha, sehatry ny faharanitan-tsaina. Nlô Dzob, "Ny Lohan'ny Lanitra", no anarana nomen'ny Ekañ an'i Afrika Equatoriale azy. Jèki-Olo no anaran'ilay maherifo mitôlôjia lehibe an'ny vahoaka Sawa ao amin'ny Kameroney Littoral. Jèki, toa an'i Horus, dia tarehin-masoandro. Nño Mbog, ny "Lehiben'ny Mbog", dia manondro ny Masoandro zenithal, mitovy dika amin'ny Mapubi, "The Light", eo amin'ny vahoaka Bassa ao Kamerona. Olo, Nlô, Nnò Wiki puzzle.svg lohany ary ataovy tsara ny fepetra hr, horo, hodo, holoSns ny lovan-tsofina Nilot.NLO izany no Ngalo by suction of g. Le Ngaleu ny Bamiléké any Kamerona dia manolotra fehin-kevitra mitovy amin'izany; na aiza na aiza ary izany foana no anarana "Horus".
Vidio € 12,21
Nohavaozina farany tamin'ny 28 Jolay 2021 11:20 PM
Fitsaboana zavakanto sy fampiandohana afrikana - Zirignon Grobli (PDF)
Iza moa i Quamina sy i Jack Gladstone?
Miala amin'ny olana - Eckhart Tollé (Audio)
Toni Morrison, loka Nobel ho an'ny literatiora ao amin'ny 1993